I-China L-Isoleucine CAS 73-32-5 yabenzi bePharma Grade (USP / EP) nabaphakeli | Honray
I-L-Isoleucine (i-Iso esifushanisiwe) ingenye yama-amino acid ayi-18, futhi ingenye yama-amino acid ayisishiyagalombili abalulekile emzimbeni womuntu. Ibizwa ngokuthi yi-branched chain amino acid (BCAA) ene-L-Leucine ne-L-Valine ndawonye ngoba zonke ziqukethe uchungechunge lwehlangothini lwe-methyl esakhiweni sazo samangqamuzana.
I-L-Isoleucine ingenye yama-amino acid abalulekile angenakwenziwa ngumzimba futhi aziwa ngekhono lawo lokusiza ukubekezela nokusiza ekulungisweni nasekwakhiweni kabusha kwemisipha. Le amino acid ibalulekile kubakhi bomzimba njengoba isiza ukukhulisa amandla futhi isiza umzimba ukuthi ululame ekuqeqeshweni.
Imiphumela ye-L-Isoleucine ifaka ukulungiswa kwemisipha nge-leucine ne-valine, ukulawula i-glucose yegazi, nokunikeza izicubu zomzimba ngamandla. Iphinde ithuthukise ukukhishwa kwe-hormone yokukhula futhi isize ukushisa amafutha we-visceral. La mafutha angaphakathi ngaphakathi komzimba futhi awakwazi ukugaywa ngempumelelo kuphela ngokudla nangokuzivocavoca umzimba.
I-L- Isoleucine ingakhuthaza ukuhlanganiswa kwamaprotheni futhi ithuthukise izinga le-hormone yokukhula ne-insulin, ukugcina ibhalansi emzimbeni, ingakhuphula amandla omzimba omzimba, ilaphe ukuphazamiseka kwengqondo, ukukhuthaza ukwanda kwesifiso sokudla nendima yokulwa negazi, kepha futhi nokwenyuswa kokufihlwa kwe-insulin. Isetshenziswa kakhulu kwezokwelapha, embonini yokudla, ukuvikela isibindi, indima yesibindi kumisipha yamaprotheni metabolism kubaluleke kakhulu. Uma ukuswela, kuzoba khona ukwehluleka ngokomzimba, njengesimo sekhoma. I-amino ye-glycogenetic ne-ketogenic ingasetshenziswa njengezengezo zokudla okunempilo. Okokufakwa kwe-amino acid noma izithasiselo zomlomo zomlomo.
Imithombo yokudla ehamba phambili ye-L-Isoleucine ifaka irayisi elinsundu, ubhontshisi, inyama, amantongomane, ukudla kwesoya kanye nokudla okuphelele. Njengoba luhlobo lwe-amino acid ebalulekile, kusho ukuthi ayinakwakhiwa emzimbeni womuntu futhi itholakale ekudleni kuphela.
Ukujikeleza okukhethekile [a] D20
Ukuzungezisa okuqondile [a] D25
icace futhi ingenambala ≤BY6
Izinsimbi ezisindayo (Pb)
Amanye ama-amino acid
ukungcola ngakunye≤0.5% ukungcola okuphelele≤2.0%
Langaphambilini I-L-Threonine CAS 72-19-5 ye-Pharma Ibanga (USP)
Olandelayo: I-L-Threonine CAS 72-19-5 yeBanga Lokudla (FCC / AJI / USP)
Izithasiselo Zokudla zeGlycine
L-Threonine Pharm Ibanga
L-Threonine Pharm Ibanga, L-Valine 72-18-4, I-Pharm Grade L-Leucine, 73-32-5 L-Isoleucine, Ukudla Kwezilwane, L-Threonine Ibanga Lokudla,